Daawo Sawirro: Nin Shiinees ah oo ku dhaqaaqay arrin lala fajacay & warbaahinta caalamka oo hadal heysa - Galmada.net
Daawo Sawirro: Nin Shiinees ah oo ku dhaqaaqay arrin lala fajacay & warbaahinta caalamka oo hadal heysa
May 5, 2017 June 11, 2017 admin
Nin u dhashay dalka Shiinaha oo Ingineer ah ayaa ku dhaqaaqay talaabo dad badan ka fajacisay ka dib markii uu xaas ka dhigtay haweeney robot ah.
Zheng Jiajia ayaa sheegay inuu ka daalay raadinta xaas bani’aadam ah oo jaceyl uu la wadaago, uuna door biday in talaabadan uu ku qanciyo naftiisa iyo waalidkiis oo culeys ku saarayey inuu guursado.
Talaabada uu qaaday Zheng Jiajia ayaa si weyn uga fajacisay dadkii ka war helay iyadoo warbaahinta caalamka ay arrintan si weyn u hadal heysay dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay.
Gabadha robotka ah ee uu ninkan la aqalgalay ayuu u bixiyey magaca ah Ying-ying, waxaana loo suuradeeyey ama loo ekeysiiyey muuqaalka gabar Shinees ah, iyadoo ku hadli karta ereyo aan sidaa u badneyn oo ka tirsan luuqada Chineska ah.
Arooskan ayaa waxaa ka soo qeyb galay ninkan hooyadiis iyo saaxiibadiis, wuxuuna ka dhacay magaalada Hangzhou, balse maamulka dowlada hoose ee magaalada ayaa sheegay in guurkan aysan aqoonsaneyn.
Dalka China ayaa waxa ka taagan isu dheelitir la’aan la xiriirta tirada ragga iyo dumarka, waxaana 115-kii ragba ku soo aadaya 100 dumar ah taasoo sabab looga dhigay sharciga dalkaas ooan ogeleyn in qoyskiiba uu dhalo wax ka badan hal canug.
Qoysaska badankood ayaa ilmaha uurka ku jira iska soo rida marka ay ogaadaan iney gabar tahay, iyagoo daneynaya in canuga kaliya ee loo ogol yahay uu noqdo wiil taasina waxay keentay iney wiilashu bataan.
Maxaa Isku Keenay Bollywood Actor Ali Fazal Iyo Paris Jackson Heesaagii Caanka Ahaa Michael Jackosn Gabadhiisa